Netflix ၏မူရင်း Hemlock Grove ရာသီ ၃ ရက်ကိုထုတ်ပြန်သည် - Netflix မူရင်း
Netflix ၏မူရင်းစီးရီး Hemlock Grove ရာသီ ၃ ရက်ကိုထုတ်ပြန်သည်
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ၅၀ - Gilmore Girls သည်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲ ၅၀ - တစ်ခါတစ်ချိန်ကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိသည် Netflix မူရင်း က Bryce Olin လွန်ခဲ့သော5နှစ်က @bryceolin ကိုလိုက်နာပါ
The Netflix မူရင်းစီးရီး Hemlock Grove Netflix ကိုလာမည့်အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်၊ တတိယနှင့်နောက်ဆုံးရာသီအတွက်!
Netflix ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရာသီအတွက်ပဟေtrailerိနောက်တွဲယာဉ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ယူကျု့ချန်နယ် ကနေတဆင့် အမျိုးမျိုး ။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးရာသီနှစ်ခုနှင့်အတူချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားလျှင် Hemlock Grove, ရှေ့ဆက်သွားကြည့်ပါ
Hemlock Grove Netflix အတွက်ပြပွဲကို Lee Shipman နှင့်အတူတီထွင်ခဲ့သူ Brian McGreevy ရေးသားခဲ့သောနာမည်တူစာအုပ်အပေါ်အခြေခံသည်။ စီးရီးအတွက်, Chic Elgee ရာသီသုံးခုစလုံးအတွက်ရှေ့ပြေးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်လူကြိုက်များထိတ်လန့်ဒါရိုက်တာ Eli Roth, ပြပွဲများအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။
Pennsylvania ပြည်နယ် Hemlock Grove၊ Pennsylvania ရှိ Roman Godfrey (Peter Skancegard) နှင့် Peter Rumancek (Landon Liboiron) မှမိန်းကလေးငယ်တစ် ဦး ကိုလူသတ်မှုအပြီးတွင်သူလျှို့ဝှက်ထားသည့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလူအများရှာဖွေတွေ့ရှိသောမိန်းကလေးလူသတ်သမားအားရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
Hemlock Grove Netflix ရဲ့ပထမဆုံးကြီးမားတဲ့မူရင်းပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ စီးရီးသည်ပထမရာသီအပြီးတွင် Emmy အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။
ရုံအကြောင်းကိုနှစ်လမတိုင်မီနှင့်အတူ Hemlock Grove Season3ကိုလာမည့်သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း Netflix မှကြော်ငြာသောပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန်ပြင်ဆင်ပါ။ ငါ trailers, အင်တာဗျူးများ, twitter အစည်းအဝေးများနှင့်အရာအမျိုးမျိုးတို့ကိုအကြောင်းပြောနေတာပါ! ဒါကသူတို့ရဲ့မူလပြပွဲများအတွက် Netflix ကအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို, ငါ၏ဤရာသီမစဉ်းစားကြဘူး Hemlock Grove မည်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့လိုပဲ, သင်ရာသီ3၏လွှတ်ပေးရန်မတိုင်မီနှစ်လရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ကနောက်ဆုံးရာသီရဲ့ Premiere အဘို့အတက်ဖမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားရန်အချိန်အများကြီးရှိသည်ဆိုလိုသည်!
နောက်တစ်ခု:Netflix မှာ 50 အကောင်းဆုံးပြသ နောက်တစ်ခု:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀
Netflix အသစ်ဖြန့်ချိမှု: Lucy Hale တွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည့် DUDE
အွန်လိုင်း Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒ Watch: ရာသီ 15, ဇာတ်လမ်းတွဲ 20 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ
သဘာဝလွန်ရာသီ (၁၅): နောက်ဆုံးရာသီ၏ပထမဇာတ်လမ်းတွဲ ၁၃ ခုသည် Netflix တွင်ဖြစ်သည်
Game of Thrones မှသရုပ်ဆောင်သူကဇာတ်ကောင်သည်ရာသီ (၇) ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
Riverdale သွန်း: အဘယ်သူသည်နှင့်အဘယ်သူသည် Riverdale ရာသီ5ရက်နေ့တွင်ထွက်မယ့်?
Casper ကဒီည Netflix ကိုလာနေပြီ
အကောင်းဆုံး Netflix ဖြင့်ရေးသားထားသောဟယ်လိုဝင်းဝတ်စုံ ၂၀
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင် ၅၀ - ဂလက်ဒီတာ
Barbarians ရာသီ2လွှတ်ပေးသည့်နေ့စွဲ, သွန်း, နောက်တွဲယာဉ်, အနှစ်ချုပ်နှင့်ပိုပြီး
Vampires vs. The Bronx အသက်အဆင့် - Netflix ရုပ်ရှင်သည်ကလေးများအတွက်အဆင်ပြေသလား။
Netflix ပေါ်ရှိ Bill Hader နှင့်အတူ HBO စီးရီး Barry ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား။
Danny ရုံးသရုပ်ဆောင် cordray
ဗဟိုရာသီ 8 Netflix မှလာပေတဲ့အခါမှာ
supergirl တစ်ရာသီ2ရှိသေး၏
ဒီ Valentine Day ကိုကြည့်ရှုရန် Hulu အပေါ် 15 အကောင်းဆုံးရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင်
NCIS ရာသီ 14 သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။
ရာသီ ၁၀၀ သည်ယနေ့ည Netflix သို့လာမည်
Shadowhunters: Inf Infernal Devices prequels များကိုနောက်တစ် adapted ့ဆက်အဆင် adapted ပြောင်း adapted နိုင်မည်လား။
မင်းက The One လား။ ရာသီ2အတူတူနေဆဲ?